လူငယ်တွေအတွက် စိတ်ကူး OFFICIAL MUSIC VIDEO ထွက်ရှိလာတဲ့ အဆိုတော် ယုန်လေး
အဖြူရောင် Monday, 29 June 2020
လူငယ်တွေအတွက် စိတ်ကူးကောင်းတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ယုံလေးရဲ့ စိတ်ကူး(OFFICIAL MUSIC VIDEO) ကို ဇွန် ၂၇ ရက်က ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတေးသီချင်းကို့ Yone Lay နဲ့ Min Z တို့ရေးစပ်ထားပြီးYone Lay ? A4 Kyaw Swar ? Min Z တို့က သီဆိုထားတာဖြစ်ပါ တယ်။ ပညာသင်နေတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဖြူစိမ်းဝတ်သင်တဲ့ အရွယ်မှာ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်တွေကိုအဓိကထားလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် သီချင်းစာသားများဖြင့် ရေးစပ်ပုံဖော်ထားတဲ့အပြင် မိသားစုအတွက် ကိုယ့်အချိန်တွေကို အဓိကပေးဆပ်နိုင်ချိန်မှာ ပေးဆပ်ဖို့အတွက် ရေးစပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုတော်ယုံလေးအနေနဲ့ ယခုတေးသီချင်းမှာလည်း တက် သစ်စအဆိုတော်လေးတွေကို လက်တွဲခေါ်ယူပြီး သီဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကူးသီချင်းကိုတော့ အဆိုတော်Yone Lay ? A4 Kyaw Swar ? Min Z တို့က သီဆိုထားပြီး တေးရေးYone Lay ? Min Z eJY Mixing - Thar Nge ? Music - Mikhel Shine တို့က ပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်သည်။